Indlu emangalisayo yeLake Pusiano - I-Airbnb
Indlu emangalisayo yeLake Pusiano
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguRenata
Onke amagumbi efulethini ajonge elunxwemeni lwelinye lamachibi amahle kakhulu kunxantathu weLarian, iPusiano, epeyintwe ngumzobi we-pointllist uSegantini kwaye waculwa yimbongi uParini. Kwindawo yeendwendwe kukho ithala elinefenitshala, elilungele ukonwabela ilanga ehlotyeni njengasebusika, kunye nezidlo zothando kwindawo yechibi enomtsalane owahlukileyo. Ifanelekile impelaveki yokuphumla okanye iholide ekufutshane ne-Resegone, intaba eyenziwe nguAlessandro Manzoni "Farewell to the mountains" ye "I Promessi Sposi", kodwa ikhethekile njengesiseko sohambo, ukuhambahamba, ukuhamba ngenqanawa, ukukhwela ibhayisekile, iparagliding kunye nokuloba. I-1.5 km kude yindawo engcwele yaseMadonna della Neve, indawo yokufikela efakwe kwindlela "yohambo luka-Augustinian" eLombardy. Ngexesha lokuhlala kwakho, unokuthatha ithuba lokutyelela isixeko saseMilan, esikuhambo lwemizuzu engama-40 ngololiwe okanye ngemoto. Izixeko zaseComo naseLecco zikude nje ngemizuzu eli-15 kwaye zinokufikelelwa ngokulula ngebhasi okanye ngemoto.
Iindwendwe zingasebenzisa onke amagumbi eflethi kunye ne-terrace enhle enezihlalo ze-armchairs, ii-sunbeds kunye netafile ngasechibini. Indawo yokupaka iyafumaneka kwimoto enye okanye ngaphezulu. Indlu ikumgama omfutshane ukusuka kumbindi wedolophu, apho kukho iivenkile ezithengisa ukutya, iikhemesti, iibhari, iicuba, iibhanki, iindawo zokutyela kunye namaziko ezemidlalo axhotyiselwe ukuloba kunye nokuhamba ngephenyane.
4.75 · Izimvo eziyi-113
Kwidolophana unokuthatha uhambo oluhle ecaleni kwechibi kunye nepaki ye-Villa Beauharneis, isakhiwo senkulungwane yeshumi elinesithoba apho i-viceroy Eugenio Beauharneis, unyana kaGiuseppina Bonaparte, umfazi kaNapoleon, wayehlala khona.
Ichibi iPusiano lithandwa kakhulu ngabathandi bokuloba.
Echibini intshatsheli yeOlimpiki u-Antonio Rossi uqeqesha ngephenyane.
Ngethuba lokuhlala kwabo, ndifumaneka kwiindwendwe naluphi na ulwazi kunye neengcebiso, ngefowuni okanye nge-imeyile.